Archive du 20180507
Kolikoly avo lenta Depiote maro higadra
Ny 05 aprily no nametraka fitoriana teny amin’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC) ny depiote miisa 73, izay mitondra ny anarana depioten’ny Fanovana amin’izao fotoana izao noho ny fahitan’izy ireo fa nisy ny kolikoly avo lenta nampandaniana ireo lalàm-pifidianana teny amin’ny antenimieram-pirenena ny 03 aprily.
Hery Rajaonarimampianina Matahotra mafy ny higadra
Tapa-bolana mahery kely izay dia tsy latsaky ny 2 isan’andro ny isan’ireo fitakiana ny fametraham-pialan’ny filoham-pirenena ankehitriny, Hery Rajaonarimampianina.
Fitondrana HVM Ory fatratra ara-tserasera
Efa niaraha-nahita hatrany am-piandohana ny tsy fahatomombanana ara-tserasera eo anivon’ny fitondrana HVM. Nahatarafana izany daholo nanomboka tany amin’ny kabary dika mitovin’ny filoham-pirenena fony nosalorana samboady,
Iraka manokan’ny Firenena Mikambana Ny samy Malagasy no aoka hifandamina
Tonga eto Madagasikara amin’izao fotoana izao i Abdoulaye Bathily, mpanolotsaina manokan’ny Sekretera Jeneralin’ny Firenena mikambana, izay voalaza fa hanelanelana sy handamina ny krizy politika eto.
Mihetsika ny Faritany Miandry izay didy avoakan’ny HCC
Nafana ny hetsi-panoherana tamina renivohi-paritany maro teto amin’ny firenena ny sabotsy teo ary niray feo amin’ny fitakiana ny fialan’ny filoha Hery Rajaonarimampianina sy ny ekipany ny rehetra amin’ny ankapobeny.
Tolon’ny depiote ho an’ny fanovana Tsy mihemotra intsony na dia ezahana lotoina aza
Lasa resabe sy ezahina hamotehana ny tolona eny amin’ny 13 mey amin’izao fotoana ny fivoizana ny hoe niresaka ny lehiben’antoko izatsy na izaroa sy ny filoham-pirenena. Ny mpitari-tolona eto dia aoka tsy hadino fa ny solombavambahoaka.
Antoko HVM Efa andosiran`ny olony
Mibaribary toy ny vay an-kandrina ny tsy fahombiazan`ny antoko politika HVM izay antokon`ny fitondrana. Manao izay ho afany hampatanja-tena ireo tanan-kavanan`ny filoham-pirenena saingy raha ny zava-misy aloha dia mitotongana hatrany ny fahitana azy.
Feon’ny fieritreretan’ny HCC Mpandresy, hoy ny Ankata
Dila ny 48 ora nampahiratana ny jamba sy nampandrenesana ny marenina ary nampitenenana ny moana, hoy ny filohan’ny fikambanana Ankata, Brice Christopher Rabehavana, tetsy Ankadifotsy ny zoma teo.
Vahoakan’i Toliara sy ny Tokobetelo Miala i Hery Rajaonarimampianina sy Mahafaly Olivier
Ireo raiamandreny ao amin’ny fikambanana Tokobetelo sy ny vahoakan’i Toliara soloin’Atoa Sazalahy Tsianihy tena tonga eto Antananarivo dia misaotra ny raiamandreny H.C.C nampandresy ny fahamarinana sy ny ara-dalàna izay voasoratra sy voalaza ao amin’ny lalàmpanorenana.
O ry jao namana …
Tena nasehonao mihitsy rajao fa tena tompon ny sera ianareo raha vao resaka sinema ah. Dia nalefanareo ny mpilalao sary mihetsika maro nilanja sora-baventy haneho fa mamim-bahoaka ianareo.
Paositra Malagasy Misy ny fitaovana vaovao manafaingana ny asa
Ankoatra ireo tolotra marobe misy ao amin’ny Paositra Malagasy dia nanaitra ny maro ny fisian’ny fitaovana lehibe naseho nandritra ny foara FIM tetsy amin’ny Forello expo Tanjombato.
Flore et Aroma Hanafatra ilay karazam-bary hafakely avy any Antsiranana
Betsaka aminintsika eto Madagasikara ankehitriny no manafatra ireo karazam-bary any ivelany izay lava fantsy sy miparitaka rehefa hanina.
Kaominina Ankaraobato Feno 40 taona, betsaka ny fotodrafitrasa efa vita
Mankalaza ny faha-40 taona nisiany ny kaominina Ankaraobato, distrikan’Antananarivo Atsimondrano.
Famaranana Basket N1 B Tompondakan’i Madagasikara 2018 ny ECBBA
Voahosotra ho tompondakan’i Madagasikara 2018 amin’ny taranja Basikety sokajy N1 B ny ekipan’ny ECBBA Analamanga. Resin’izy ireo tamin’ny isa nazava 78-66 omaly tetsy amin’ny kianja mitafon’i Mahamasina ny ekipan’ny As Fanalamanga Alaotra Mangoro.
AT2B Basikety 10 taona isika ‘zao Hanampy betsaka amin’ny Fety de Basket ny Otiv Vonjy
Vonona tanteraka ny fikambanana AT2B na Andraisoro Tia Basket-Ball amin’ny fikarakarana ny Fety de Basket-Ball (basikety, lanonana, mozika, dihy) hotontosaina amin’ny sabotsy 12 mey sy sabotsy 4 aogositra sy ny alahady 5 aogositra 2018,
Kick Boxing Seksiona Antananarivo Renivohitra Natomboka tamin’ny sabotsy 5 aprily ny fiadiana ny ho tompondaka
Natomboka tamin’ny sabotsy 5 aprily teo, tao amin’ny “dojo Cospn” Mahamasina, ny fifaninanana fiadiana ny ho tompondakan’ny seksion’ny taranja kick boxing eto Antananarivo Renivohitra 2018 tarihan’ny filohany Ralijaona Léon.
Rugby Seksiona Avaradrano Ny XV TEXAS no nandroaka ny omby midôla
Voahosotra ho tompondaka 2017 sokajy D-1 eny amin’ny seksion’ny rugby Avaradrano, ny ekipan’ny XV TEXAS Ambatomainty ka nandroaka ny omby midôla (midola trafo) nivoaka ny kianja Makis teny Andohatapenaka omaly alahady 06 mey rehefa nandresy ny ATM Manjakaray tamin’ny isa 33-17.
Lasa isika raha mahay !
Fahagagana sy fitsimbadihana ara-politika lehibe sisa fara-fanantenan’ny fanjakana ankehitriny hahafahany mijanona eo amin’ny fahefana.
Saram-pisoratana anarana ho an’ny mpianatra Niakatra 10 % ka hatramin’ny 50 %
Lanja miakatra tokoa ny fiainana. Nahitana fiakarany 10% ka hatramin’ny 50 % indray ny fanavaozana ny saram-pisoratana anarana ho an’ny mpianatra amin’ny taom-pianarana 2018-2019 ho avy io.
Air Madagascar sy Air Austral Namondrona ny heriny ho an’ny FIM 2018
Namondrona ny heriny nentina nanohanana ny “Foire Internationale de Madagascar” andiany faha-13 izay nifarana omaly alahady teny amin’ny zone Forello expo Tanjombato ny Air Madagascar sy ny Air Austral.
Asa fandraharahana sy fanondranana vokatra Efa mitombo ny lalam-barotr’i Madagasikara
Nifarana omaly ilay hetsika goavana ara-toekarena « Foire International de Madagascar » andiany faha-13 izay notanterahina tetsy amin’ny Forello expo Tanjombato.
Fambolena sy fiompiana Liana ny tanora Malagasy
Nifarana omaly alahady 6 mey ilay foaran’ny biby fiompy sy ny vokatra azo avy aminy (FEPA) andiany fahafolo notanterahina tetsy amin’ny CBA By Pass Alasora.
Rija Ramanantoanina Nanaporofo ny maha goavana azy
Kintan`ny mozika Malagasy… Tsy fandokafana fotsiny fa tena voamarina mihitsy ny anarany, raha notarafina tamin`ny seho nataon`i Rija Ramanantoanina omaly alahady teo teny amin`ny lapan`ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. Tena tsy fahita loatra ary amin`ny lafiny maromaro mihitsy io.
HETSIKY NY DEPIOTE
Raharahan’ny depiote fa tsy misy hidiran’ny lehiben’antoko ny fitakiana eo amin’ny kianjan’ny 13 mey amin’izao, hoy i Maitre Hanitra Razafimanantsoa manoloana ny feo miely fa nisy ny fihaonana teo amin’ny filoham-pirenena sy ny lehiben’ny antoko mpanohitra.
Notokanana ny andron’ny sabotsy lasa teo ny fotodrafitrasa lehibe iray « Hotel Honneur », ao amin’ny Paon d’or eny Antanetibe Ivato.